बीस दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर देशभरका बाढीपहिरो पीडितको उपचारमा खट्न चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आकस्मिकबाहेक ओपिडी तथा अन्य सेवा बन्द गरेका चिकित्सकहरूलाई ‘आन्दोलन छाडेर सेवामा ओर्लिन’ डा. केसीले आह्वान गरेका हुन्।
शुक्रबार रातिदेखिको अविरल वर्षाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराई र केही पहाडी जिल्लामा बाढीपहिरोको कहर छाएको छ। अहिलेसम्म ३० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको र सयौं घरपरिवार विस्थापित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सेना र प्रहरी टोली उद्धारमा खटिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य उपचार बन्द गर्नु पेसागत मर्यादाविपरीत भन्दै डा. केसीले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बिरामीको उपचार नछाड्न चिकित्सकहरूलाई आह्वान गरेका हुन्। नेपाल चिकित्सक संघले नै देशभरका डाक्टरहरूलाई सेवामा जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथितिविरुद्ध डा. केसी एघारौं चरणको अनसनमा छन्। अनसन २० औं दिनसम्म पुग्दा उनको स्वास्थ्य नाजुक बनेको छ। उनको मुटुको गति अस्वाभाविक रूपले बढेकाले जुनसुकै बेला अवस्था गम्भीर हुनसक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जालझेल गरेर मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धन फुकाउन खोजेको भन्दै उनले अनसन छाड्न अस्वीकार गरेका छन्। शनिबार पनि नागरिक समाजका अगुवाले अनसन छाड्न आग्रह गरेका थिए। केसीले भने आन्दोलनको मर्म र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा कानुन नबनेसम्म अनसन नछाड्ने बताएका छन्।
उनको यही आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै शनिबार राजधानीमा जुलुस प्रदर्शन भयो।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन २९, २०७४, १२:०३:५४